ट्यूलिप्सको नाच, नतालिया इटक्सानोको हत्याको रहस्य वर्तमान साहित्य
ट्युलिप नृत्य स्पेनी लेखक इबोन मार्टिन एल्वारेजले एक थ्रिलर हो। पुस्तक २०१ in मा प्रकाशित भएको थियो र छोटो समयमा यो बिक्रीको पहिलो स्थानहरूमा अवस्थित थियो, जसले लेखकको क्यारियरलाई ठूलो बृद्धि गरेको थियो। आज, आइबन विधाको सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शनकर्तामध्ये एक हो, र यसलाई "सस्पेन्सका बास्क मास्टर" भनिन्छ।
यो रहस्य नतालिया इटक्सानोको हत्याबाट शुरु हुन्छ, Gernika बाट एक सफल पत्रकार। अपराध स्ट्रिमि viaको माध्यमबाट प्रसारित गरिएको थियो एक प्रसिद्ध सामाजिक नेटवर्क को माध्यम बाट र हजारौं विचारहरु पुग्यो, जुन यसले सम्पूर्ण समुदायलाई चकित पारे। लेखकले धेरै पूर्ण कथा बनायो; पुलिसको अनुसन्धानको सटीक विवरणहरू जत्तिकै उसको वातावरणको विवरण सफा छ। तिनीहरूको पक्षका लागि, पात्रहरू विविध छन् र राम्रोसँग, परिश्रमपूर्वक बुने नाटकहरूको साथ।
1 ट्यूलिप्सको नृत्यको सारांश
2 ट्यूलिप्सको नाचको विश्लेषण
4 लेखकको बारेमा केहि जानकारी: Ibon Martín vlvarez
4.1 बास्क देश को माध्यम बाट यात्रा
4.2 प्रारम्भिक उपन्यासहरू
सारांश ट्युलिप नृत्य
यो सामान्य दिन थियो उर्दाबाई लाइन ट्रेनले यात्रा गर्यो सामान्य, जब, अचानक, ड्राइभर देखे ट्र्याकमा दाँयाको दूरीमा केही। जब उहाँ पुग्नुभयो, उहाँ स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्थ्यो कि यसको बारेमा के थियो: यो थियो एउटी आइमाई उनको हातमा रातो ट्यूलिपको साथ। त्यस मानिसले तुरून्त हल्किंग मेशिन रोक्न खोज्यो, तर समयको हिसाबले यो असम्भव छ भनेर उसलाई गहिरो रूपमा थाहा थियो।
रन-ओवरको ठीक अघि, ड्राइभरले महिलालाई चिन्न सकेन ... यो उनकी श्रीमती नतालिया एटक्सानोको बारेमा थियो, Gernika को एक प्रसिद्ध रेडियो पत्रकार। यस जघन्य अपराधको योजना बनाएको बिरामी दिमागले घटनास्थलमा सेलफोन छोडिदियो, जसको साथमा त्रासदी फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। हजारौं दर्शकहरूले त्यो अमानवीय घटना अवलोकन गर्न सक्षम थिए।
यी घटनाहरूको परिणाम स्वरूप, विशेष प्रभाव होमिड इकाई सिर्जना गरिएको छ, मुद्दाको छानबिन सुरु गर्न। यो समूह सब इन्स्पेक्टरको बनेको छ एने सेस्टो र उनको पार्टनर एटर गोनागाएजेन्टहरूसँगै जुलिया लिजरदी, Txema मार्टिनेज र मनोविज्ञानी सिल्भिया.
जब अनुसन्धान शुरू, अपराधको विशिष्ट विवरणहरू उजागर गरियो, र उनीहरु मध्ये, सब भन्दा स्पष्ट र उल्लेखनीय: रातो ट्यूलिप र पीडितको हातमा चम्किलो, शरद inतुमा भेट्टाउन गाह्रो कुरा। यो र अन्य तत्वहरूले सुझाव दिन्छ कि ऊ कुनै पनि हत्यारा मात्र होइन सम्भवतः एक सिरियल किलर।
यो तर्क बल लिन्छ जब तिनीहरूले उस्तै प्रमाणको साथ महिलाको अन्य निकाय भेट्टाउँछन्।। यसैकारण कालो र अन्तर्दृष्टि सिरियल किलरको लागि समय बिरूद्ध क्वेस्ट सुरु हुन्छ।
विश्लेषण ट्युलिप नृत्य
ट्युलिप नृत्य (2019) यो एक थ्रिलर हो मुख्य गरी बास्क समुदायको Gernika नगरपालिका मा सेट। किताब यसमा short short छोटो अध्यायहरू छन्, ती मध्ये केही छन् तेस्रो व्यक्तिमा रिपोर्ट गरियो एक सर्वज्ञ कथनकर्ता द्वारा, र पहिलो व्यक्ति मा अन्य कथा मा एक पात्र बाट।
नायकहरू -अनुसन्धान इकाईका चार सदस्यहरू ती धेरै राम्ररी वर्णन गरिएको छ, दृढ, गतिशील र चाखलाग्दा कथाहरूका साथ, जुन वर्तमान वास्तविकताबाट भाग्न सक्दैनन्। यी व्यक्तिहरू फरक साना बारी र संस्कृतिहरू हुन्, जो तिनीहरू विकसित हुनेछन् बिस्तारै प्लट बढ्दै जाँदा
पात्रहरूको बिच एने सेस्टिनोलाई हाइलाइट गर्दछ, जसलाई उसको सबै जीवन बताइएको छ। उनीसँगै, जूलिया र अन्य एजेन्टहरूले षड्यन्त्र रचे। आइबनको कथाले पाठकलाई उनीहरूको जीवनको अंश हुन उत्प्रेरित गर्छ, उनीहरूलाई माया गर्ने झैं
अनुसन्धानको मुख्य शीर्षकको अतिरिक्त, अन्य विषयहरु प्रस्तुत छन्। सब भन्दा प्रासंगिक एक हो लैंगिक हिंसा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित जुवा। तिनीहरू पनि बाहिर खडा पुलिस दुरुपयोग र भ्रष्टाचार, उत्पीडन, दुरुपयोग र परिवार आघात।
लेखकले आफ्नो यात्राको माध्यमबाट प्राप्त गरेको अनुभव इतिहासभरि प्रस्ट हुन्छ। मार्टेनले उर्दाबाईमा प्रत्येक दृश्यको विस्तृत वर्णन गर्दछन्; अन्तिम परिणाम एकै समयमा सरल र शानदार छ, यति धेरै कि पढेर यो Gernika वा मुंडाका को स्थान कल्पना गर्न जटिल छैन; झरना र अन्य परिदृश्य।
रहस्यमय वातावरण The पुस्तकको सुरूमा वर्णन गरिएको एग्रीगियस डूमले उत्पन्न गरेको- यो कथा भर प्रत्येक रेखा मा राखिएको छ। रिजोलुसन ड्रप द्वारा स्पष्ट गरीन्छ, जसले पाठकलाई सुरूदेखि अन्तसम्म अन्तर्निहित राख्छ।
ट्युलिप नृत्य वेबमा एक उच्च उच्च स्वीकृति दर छ: 85 1.100% भन्दा बढी पाठकहरूले पुस्तक मनपराए। Amazon. Amazon / of को औसत औसत स्कोरको साथ मात्र अमेजनमा, कार्यसँग १,१०० भन्दा बढि रेटिंगहरू छन्। Stars तारे प्रमुख,% 4,4% संग; जबकि stars तारा भन्दा कम रेटिंगहरू थोरै छन्, केवल १०%।
सस्पेंसका प्रेमीहरू यस किस्तमा खुसी हुनेछन्। यो एक द्रुत गति, ताजा, मनोरन्जनकारी कार्य हो, एक जीवन्त ताल र एक आश्चर्यजनक अन्तको साथ। कुनै श doubt्का बिना, थ्रिलर फ्यानहरूका लागि उत्कृष्ट विकल्प।
लेखकको बारेमा केहि जानकारी: Ibon Martín vlvarez
गिपुज़कोआका पत्रकार र लेखक इबोन मार्टिन एल्वारेज १ 1976 XNUMX मा फ्रान्सेली सिमाना नजिक स्यान सेबास्टियन (बास्क कन्ट्री) सहरमा जन्मेका थिए। उनले बास्क कन्ट्री युनिभर्सिटीमा सञ्चार र पत्रकारिताको अध्ययन गरे। आफ्नो डिग्री पूरा गरेपछि, उनले विभिन्न स्थानीय मिडियामा काम गरे जुन उनले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो जुनसुकै कुराको साथ मिलाए: यात्रा।
बास्क देश को माध्यम बाट यात्रा
बास्क कन्ट्रीको परिदृश्य र भौगोलिक यात्राको लागि जब उनले एउटा सपनाको अनुसरण गर्ने निर्णय गरे तब उनको जीवन उल्टो भयो। उनको योजना युस्काल हरियाको ऐतिहासिक क्षेत्रका सयौं मार्गहरू यात्रा गर्ने थियोदुबै पर्यटन स्थलहरू र ग्रामीण क्षेत्रहरू। उनको चाहनासम्म पुग्दा उनले साहित्यमा प्रवेश गरे, आफ्नो यात्रा र itineraries को बारे मा पुस्तक लेख्न थाले स्पेनिश समुदाय मा।
यी गाईडहरूका साथ, लेखकको मुख्य उद्देश्य भनेको ठूलो पर्यटक सम्भावना भएका साइटहरूको भ्रमण बढावा दिनु हो, तर थोरै मात्र ज्ञात छन्। उनले यसलाई सरल तरीकाले प्राप्त गरे: उनले बास्क समुदायमा भएका अन्वेषणमा आधारित विभिन्न सिफारिसहरू गरे। यी पुस्तकहरू धेरै सम्भव भएको छ vlvaro Muñoz को समर्थन को लागी धन्यवाद।
र 2013, आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रस्तुत, जुन उनले शीर्षक दिए अज्ञात उपत्यका; उनको गृहनगर को बारे मा एक ऐतिहासिक कथा। यस पहिलो पुस्तकको राम्रो स्वीकृति को लागी धन्यवाद, एक बर्ष पछि उनले नर्डिक थ्रिलर्सको सागा प्रकाशित गरे कल गर्नुहोस् लाइटहाउसको अपराध (२०१ 2014)। यस श्रृंखलाले चार कार्यहरू समावेश गर्दछ: साइलेन्सको लाइटहाउस (2014), छाया कारखाना (2015), अन्तिम Akelarre (2016) र साल्ट केज (2017)।
गाथा को सफलता पछि Hat यो लेखक Leire Alnua—, प्रकाशित को रोमांच वर्णन गर्दछ ट्युलिप नृत्य (2019)। यस सस्पेन्स उपन्यासको साथ, बास्क लेखकले आफैलाई विधाको सबैभन्दा राम्रो प्रतिपादकहरूको बीचमा व्यवस्थित गर्न सकेका कारण सment्लग्नताको कारण ठूलो संख्यामा पाठकहरू थिए। र 2021, सँग जारी थ्रिलरहरू, संग को प्रस्तुतीकरण उनको पछिल्लो उपन्यास: सिगलहरूको समय.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » ट्युलिप नृत्य
दिन प्रेम हराएको थियो